လက်သည်းပုံ နဲ့ ဘ၀တစိတ်တပိုင်း… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Opinion - Op-ed » လက်သည်းပုံ နဲ့ ဘ၀တစိတ်တပိုင်း…
Posted by ကို ထွဋ် on Jun 27, 2014 in Opinion - Op-ed, Opinions & Discussion |4comments
ရှည်တဲ့လက်သည်းလေးကို ပိုင်ဆိုင်တဲ့သူကတော့ ညာဘက်ဦးနှောက်က ပိုပြီးဖွံ့ဖြိုးတာကြောင့် အတွေးအခေါ်ကောင်းတဲ့သူတယောက်ဖြစ်မှာပါ။ဘာမဆို စနစ်တကျလုပ်တတ်တဲ့သူဖြစ်ပင်မဲ့ သဘောကောင်းသူဖြစ်တဲ့အတွက် သူတပါးရဲ့ လိမ်ညာတာကို ခံရတတ်တဲ့အတွက် အထူးသတိထားစေချင်ပါတယ်။ဘယ်ဘက်ဦးနှောက်က ဖွံ့ဖြိုးတဲ့သူနဲ့ အဆင်မပြေနိုင်ပါ။
အလျားရှည်တဲ့လက်သည်းကို ပိုင်ဆိုင်တဲ့သူကတော့ ဘယ်ဘက်ဦးနှောက်က ပိုပြီးဖွံ့ဖြိုးတာကြောင့် စကားအပြောကောင်းတဲ့သူတယောက်ဖြစ်မှာပါ။စိတ်ထဲထင်တာကို ပါးစပ်ကနေ လွတ်ခနဲ ပြောတတ်တဲ့အတွက် အမြဲတမ်း လန်းဆမ်းနေတဲ့ပုံပါ။စိတ်မရှည်တဲ့
အတွက် ချက်ချင်းစိတ်တိုတတ်တဲ့အတွက် နည်းနည်းသည်းခံဖို့တော့လိုမှာပါ။စိတ်ခံစားမှုကိုအလေးထားပြီး အလုပ်လုပ်တဲ့ညာဘက်ဦးနှောက်ကို ပိုင်ဆိုင်တဲ့သူတွေနဲ့တော့ အဆင်မပြေနိုင်ပါ။
၀၃. အေးအေးဆေဆေးနေချင်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးသမား
စက်ဝိုင်းပုံ(သို့)ဘဲဥလက်သည်းပုံ ပိုင်ဆိုင်တဲ့သူကတော့ ကိုယ်အချိန်ကို တန်ဖိုးထားပြီး အေးအေးဆေးဆေးနေချင်တဲ့သူပါ။လူမူဆက်ဆံရေးအပိုင်းမှာတော့အားလုံးနဲ့အဆင်ပြေအောင်နေတတ်ပါတယ်။ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရန်ဖြစ်ရင်ပထမဆုံးဝင်ပြီးဖြေရှင်းပေးမဲ့သူပါ။အမြဲတမ်းပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေတတ်တဲ့အတွက်သူတပါးရဲ့လေးစားမူယုံကြည်မူကိုခံရပင်မဲ့တခါတလေတကိုယ်ကောင်းဆန်တတ်တဲ့အတွက်သတိထားပါ။ဘာပဲပြောပြောသူကတော့ဘယ်သူနဲ့မဆိုအဆင်ပြေအောင်နေတတ်တဲ့သူဖြစ်မှာပါ။
လေးထောင့်ပုံလက်သည်းကို ပိုင်ဆိုင်တဲ့သူကတော့ စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်ပြီး အထူးသဖြင့် ယောင်္ကျားလေးတွေက များပါတယ်။ရိုးသားပင်မဲ့ ခေါင်းမာတဲ့အတွက် ပြောရခက်တဲ့သူဖြစ်မှာပါ။ခေါင်းမာတာလေးကို နည်းနည်းလျော့ရင်တော့ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့
၀၅.၀၆. အသေးစိတ်သော လူတော်
တြိဂံ(သို့)ပြောင်းပြန်တြိဂံလက်သည်းကို ပိုင်ဆိုင်တဲ့သူကတော့ လူတွေမမြင်တဲ့နေရာအထိ သေသေချာချာမြင်ပြီး အတွေးအခေါ်အသစ်တွေကို ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့သူဖြစ်မှာပါ။ပြောင်းပြန်တြိဂံကို ပိုင်ဆိုင်တဲ့သူကတော့ အပြောအဆိုပိုင်းမှာတော်တဲ့သူဖြစ်မှာပါ။
ဒါပင်မဲ့ တြိဂံလက်သည်းကို ပိုင်ဆိုင်သူကတော့ အသေးစိတ်စဉ်းစားတတ်တဲ့အတွက် သူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အပြောအဆိုကြမ်းပြီးအားမနာတတ်တဲ့သူရှိရင်တော့ မနေတတ်ပါ။
နေကြာစေ့ပုံလက်သည်းကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့သူကတော့အရာရာကိုသေသေချာချာစဉ်းစားပေးနိုင်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ရိုသေလေးစားမူကို ခံရမှာပါ။လူတွေကို ရိုရိုသေသေ ဆက်ဆံနိုင်ပင်မဲ့ မဟုတ်မခံဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်လေးကရှိတဲ့အတွက်သတိထားစေချင်ပါတယ်။
ဓားပုံလက်သည်းကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့သူကတော့ဇွဲရှိပြီးရည်မှန်းချက်ကိုအာင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်ရဲ့ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ဖို့အတွက်ဆိုရင် ဘာမဆိုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးရှိပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ကို မမြင်တော့ပဲ ဇွတ်လုပ်တဲ့အတွက် လူမုန်းတာကိုခံရတတ်ပါတယ်။
ကဲကိုယ်ရဲ့လက်သည်းလေးကတော့ ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာကို သေသေချာချာ အဖြေရှာပြီး အသုံးချနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းလျက်
ဆန်းပြားတာလေးတွေ ကိုယ်တိုင်ရေးလေးတွေတင်စေချင်ပါတယ်။ ဖဘ မှာသိပြီးသားတွေကို ခေါင်းစဉ်မတူတော့ ဘာလဲဆိုဝင်ဖတ် ခက်ခက်ခဲခဲပွင့်တော့မှဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ ဒေါသထွက်ရပါတယ်။ တမနစ်လေးကျပ်နဲ့သုံးနေရတာပါ
ကဲ.. ဆရာကြီး.. ဆိုက်က မီဒီယာ ဆိုက်လေ… တချို့ ဆိုက်ကြီးတွေတောင် အချင်းချင်း Credit ပေးကြသေးတာပဲ.. ပီးတော့ နာမည်ပေးတာကြည့်ပီး စိတ်ဝင်စား ဖတ်တယ်ဆိုရင် … မီဒီယာ သမားပဲ လူစိတ်ဝင်စားအောင် တင်တာ ဆန်းလား… မန္တလေး ဂဇက်နဲ့ သစ်ထူးလွင် ဘယ်သူ အရင် ထွက်တာလဲ.. အခု ကလေး အစ အကုန် သစ်ထူးလွင်ကို သိတယ်.. ဘာကြောင့်လဲ.. အရင် ဆန်းစစ်ပြီးမှ ကော်မန့်ပေးပါ… လူများ ယောင်တာနဲ့ လိုက်မယောင်ပါနဲ့… တချိန်က မန္တလေး ဂဇက် အရမ်းအောင်မြင်ခဲ့တယ်.. ဘာကြောင့်လဲ…
အာချောင်ချင်တဲ့ စိတ်ဓါတ်ထင်တာဘဲ သဘာရင့် မန်ဘာကြီးတွေများ
လွယ်တာကို ခက်အောင် လုပ်ကြတယ်
အော် – ဆြာကျပါပေတယ်
ကျွန်တော် နှစ်သက်သော အရာများကို စုထားတဲ့ သဘောပါ.. ဟိုဒင်းရယ်.. ဒါက ဆရာကြီးများ လမ်းမညွှန်ခင်က ပို့စ်ပါ.. နောက်ဆို ပိုမိုကောင်းမွန်သော ပို့စ်များ တင်ပါ့မယ်… ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ပေးပါ.. စိတ်တော့ မပျက်ပါနဲ့.. ဟိုဒင်းရယ်.. နောက်တင်တဲ့ ပို့စ်တွေကိုလဲ အားပေး ကော်မန့်ပေးပါဦး.. လိုအပ်သည်များကိုပေါ့.. စီနီယာ ရယ် ဂျူနီယာ ရယ် မဟုတ်ပါဘူး.. ကိုမှားနေရင် ပြင်ပေးပါ လက်ခံပါတယ်… ဆက်လက်ကြိုးစားသွားပါ့မယ်..